आफ्नो पछाडिको हेरचाह गर्न बलियो glutes | बेजिया
सुसाना Godoy | 21/06/2022 16:00 | व्यायाम
यद्यपि तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, बलियो नितम्ब हुनुमा तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुने भन्दा धेरै फाइदाहरू छन्। किनभने यो भौतिक वा सौन्दर्यको बारेमा मात्र होइन, तर हामी एक कदम अगाडि जान्छौं। किनभने यस क्षेत्रको व्यायामले हामीलाई हाम्रो ढाडको हेरचाह गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ। त्यसोभए, यो उत्तम अभ्यासको साथ व्यवसायमा पुग्ने समय हो।
तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि आज, हामीसँग भएको कामको कारणले हाम्रो मांसपेशी स्वास्थ्य प्रभावित हुन सक्छ। पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो र यसैले, हामीले यसलाई उत्तम व्यायामको साथ हेरचाह गर्न आवश्यक छ। न केवल हामी उनको लागि विशेष व्यायाम खोज्नेछौं, तर हामी देख्नेछौं, ग्लुट्सको पनि मुख्य भूमिका छ।
1 मेरो ढाडको हेरचाह गर्न मलाई किन बलियो ग्लुट्स चाहिन्छ?
2 बलियो ग्लुट्स को लागी सबै भन्दा राम्रो अभ्यास
2.1 सबै प्रकारका स्क्वाट्स
2.2 काँधमा पुल
2.3 ग्लुट किक
2.4 हिप थ्रस्ट
मेरो ढाडको हेरचाह गर्न मलाई किन बलियो ग्लुट्स चाहिन्छ?
सबैभन्दा पहिले, हामीले जान्नुपर्छ कि किन बलियो नितम्बले हाम्रो ढाडलाई असर गर्छ। ठीक छ, सत्य यो हो कि यदि हामीले यस क्षेत्रमा काम गर्यौं भने, हामीले ठूलो फाइदाहरू हासिल गर्नेछौं। तिनीहरू मध्ये, एक बलियो कोर र हामी सम्भावित पछाडि चोटहरू कम गर्नेछौं। किनकि तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, ग्लुटस मेडियस श्रोणिलाई स्थिर गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसोभए, जब हामी तिनीहरूलाई काम गर्छौं, यो क्षेत्र अझ सावधानीपूर्वक साथै राम्रोसँग सार्न सक्षम हुनेछ। किनभने लामो समयसम्म बस्दा ढाड कमजोर हुन्छ त्यसैले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले psoas व्यायाम गर्नु सबैभन्दा बढी संकेत गरिएको छ, किनभने यो तल्लो शरीरलाई ट्रंकसँग जोड्ने जिम्मामा छ। र जब हामी ढाड दुखाइ देख्छौं, तिनीहरू त्यस क्षेत्रबाट आउन सक्छन्।
जब हाम्रो नितम्ब कमजोर हुन्छ, यसले हाम्रो आसन ठीक हुँदैन। जसले हामीलाई तल्लो पछाडिको क्षेत्रमा समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न नेतृत्व गर्न जारी राख्छ र यसले बाँकीलाई असर गर्नेछ। यस क्षणबाट हामी ट्रंक स्थिर गर्न सक्छौं, त्यसपछि हामी आन्दोलनहरूको लागि राम्रो क्षतिपूर्ति गर्न र चोटहरू पछाडि छोड्न सक्षम हुनेछौं। सही अभ्यास के हो हेरौं!
बलियो ग्लुट्स को लागी सबै भन्दा राम्रो अभ्यास
सबै प्रकारका स्क्वाट्स
हामी तिनीहरूलाई धेरै टाढा धकेल्न सक्दैनौं किनभने अन्तमा, तिनीहरू सधैं फिर्ता आउनेछन्। स्क्वाट्स कुनै पनि प्रशिक्षणको आधारभूत भागहरू मध्ये एक हो र अधिक, यदि हामी बलियो ग्लुट्स चाहन्छौं। गर्न सक्नुहुन्छ आधारभूत, गहिरो र भारित वा पार्श्व स्क्वाट्स। थप रूपमा, तपाइँ व्यायाम पूरा गर्न एक लोचदार ब्यान्डको साथ आफैलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सरल अभ्यासहरू मध्ये अर्को हो तर हामी सधैं तिनीहरूलाई आवश्यक भन्दा अलि बढी जटिल बनाउन सक्छौं। Pilates जस्ता अनुशासनहरूमा पनि, यस्तो अभ्यास पनि सामान्यतया लागू गरिन्छ। यो आफैलाई हाम्रो पछाडि र हाम्रो खुट्टा झुकाएर सुत्ने बारे हो। अब गर्ने समय हो हाम्रो खुट्टाको तलव र काँधको भागमा समर्थन रहन चढ्न सुरु गर्नुहोस्। हामी माथि सास फेर्ने र तल फर्कनेछौं। हामीले प्रत्येक आरोहणमा ग्लुट्सलाई टेन्स गर्नुपर्छ।
चतुर्भुज स्थितिमा तपाईंले एउटा खुट्टा पछाडि तान्नु पर्छ, तर सधैं ग्लुटस निचोल्दै।। आफ्नो खुट्टा पछाडि फ्याँक्नुको अतिरिक्त, तपाइँ यसलाई झुकाउन र माथिको आन्दोलनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ कि सबै अभ्यासहरू सधैं भिन्नताहरूको श्रृंखलामा आउँछन्, अधिक विविध कार्यहरू गर्न सक्षम हुनको लागि।
किनभने यो एक महान सहयोगी हो जब हामी बलियो ग्लुट्स उल्लेख गर्छौं। यस अवस्थामा यो एक पेल्विक लिफ्ट पनि हो तर यो एक बार को रूप मा एक सानो वजन संग छ। तपाईं अनुहार माथि बेन्चमा सुत्नुहुनेछ, सधैं पछाडिको माथिल्लो भाग र टाउकोलाई समर्थन गर्दै। खुट्टाहरू 90º कोणमा झुकेका छन्। तपाईंले यसलाई श्रोणिमा राख्नु पर्छ र माथि माथि द्रुत गतिमा चलाउनु पर्छ। त्यसपछि हामी जमिनमा बस्ने गरी तल जान्छौं र फेरि माथि जान्छौं, हामीले पहिले उल्लेख गरे अनुसार शरीर राख्छौं। थोरै तौलबाट सुरु गर्नुहोस् र विस्तारै विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » व्यायाम » तपाईंको पछाडिको हेरचाह गर्न बलियो ग्लुट्स